Tontolo Arabo: Taona Iray An-ttsary – Ny Fantin’ireo Mpanoratray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Janoary 2012 8:25 GMT
Vakio amin'ny teny Shqip, Italiano, Français, Nederlands, Español, বাংলা, Português, Deutsch, Ελληνικά, Magyar, عربي, 日本語, 繁體中文, 简体中文, македонски, русский, English
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny fandrakofanay manokana ny :
Hetsi-panoherana Bahrain 2011
Hetsi-panoherana Maraoka 2011
Hetsi-panoherana Syria 2011
Revolisiona Tonizian 2011
Hetsi-panoherana Yemen 2011
Hatramin'ny nandoroan'ilay Tanora Toniziana, Mohamed Bouazizi, mpivaro-boankazo ny tenany tao an-tanàna kelin'i Sidi Bouzid tamin'ny Desambra 2010, dia onjam-panoheram-bahoaka iray tsy mbola nisy toy izany no nitsoka tany amin'ny tontolo Arabo. Nanatri-maso hetsika tsy mbola fahita sy tsy nisy noeritreretiny ny hatrehana mihitsy teo amin'ny fiainany ny tsirairay.
Arabo telo mpanao didy jadona no voaongana, ny sasany voatery niditra tamin'ny fanaovana fanovàna, raha ny tany an-toeran-kafa kosa indray dia namaivay sy feno rà nandriaka ny fifanandrinana.
Fa amin'izany, 2011 dia tahaka ny mijanona ho raiki-tampisaka ao anatin'ny tantaran'ny tontolo Arabo sahala amin'ny taona nanombohan'ny vahoaka nitsangana hanohitra ny fitondrana tsy refesi-mandidy nifehy azy ireo.
Satria nataontsika veloma mandrakizay ny taona 2011 ary mibanjina indray ny taona 2012, dia nangataka ireo mpanoratray izahay mba hizara aminareo ireo sary izay manamarika iny taona lasa iny eo imason-dry zareo tany amin'ny fireneny isanisany avy. Ity fantina manaraka ity no maneho ny safidin'izy ireo.
Sary avy amin'i Talel Nacer, nampiasaina rehefa nahazoana alàlana
Tamin'ny 14 Janoary 2011 dia an'arivony ireo mpano hetsi-panoherana nifamory teo akaikin'ny tranoben'ny Ministeran'ny Atitany tao Tunis nangataka ny fialàn'ny fitondràn'ilay mpanao jadona Zeine El Abidine Ben Ali. Taoriana kely tamin'io andro io ihany, nandositra nankany Arabia Saodita i Ben Ali.
mpanoratra tsy fantatra anarana
Hafatra mafonja iray avy amin'ny “tanànan'i Kafar Nabel natao fahirano “, Syria.
Sary avy amin'i KrikOrion, nampioasaina rehefa nahazoana alàlana
Na dia tsy niatrika revolisiona aza i Libanona tamin'ny 2011, ilay tanin'ny Cèdres dia nizaka mafy ihany koa ny fivoaran-draharaha sy fiantraikan'ny sahotaka tany amin'ny faritra. Saingy ho an'ireo Libane dia ny findangan'ny vidim-piainana no tena nanahirana azy ireo betsaka. Manaraka hatrany ny fampiakarana karama ataon'ny governemanta ary na ny talohan'ny naneken'ny parlemanta ny drafitra aza, misondrotra tsy misy toy izany ny vidin-javatra.
Sary avy amin'i Jillian C. York, nampiasaina eo ambany CC license (CC BY-NC-SA 2.0)
Palestina: “Miara-mizotra Ho amin'ny Fahalalahana”
Fizakà-manana Shohdi Al-Sofi, nampiasaina rehefa nahazoana alàlana
Ireo diabe am-pilaminana tao Yemen izay tsy nitsahatra mihitsy nandritra ny taona no vavolombelona iray amin'ny maha-tsy azo hozongozonina sy ny fahavononan'ny Yemenita ary manaporofo, tahaka izay mivaky eo amin'ilay takelaka be, hoe “an'ny vahoaka ny fandresena”.
Sary nalefan'i @almakna tao amin'ny Twitter
Ny sary etsy ambony, nozarain'i @almakna tao amin'ny Twitter, dia maneho ny isan'ireo faritra voalaza fa voadaroka baomba mandatsa-dranomaso, nataon'ny manampahefana tao Bahrain tanatin'ny alina iray monja. Tamin'io andro io indrindra, na izaho manokana aza dia mba sempotry ny entona mandatsa-dranomaso, nandany ny alina sy ny andro manaraka io tamin'ny faharariana sy fanarahana akaiky ireo bitsika aman-tarainan'ny mpampiasa Twitter avy amin'ny faritra rehetra nanerana ny firenena.
Sary nakarin'i @SanabisVoice tao amin'ny Twitter
Ity sary avy amin'i Sanabis Voice ity dia maneho ireo fononà baomba mandratsa-dranomaso avy nampiasaina, nangonina tamin'ny faritra kely iray, tao anatin'ny andro iray. Sary toy itony no hita mameno ny aterineto, ifampizaràn'ireo mpiondana aterineto any anaty tambajotra sosialy any, ary milaza tantara iray izay marina nandritra ny 11 volana – tantara iray tsy dia nahataitra loatra an'izao tontolo izao.
sary avy amin'i rouelshimi, nampiasaina eo ambanin'ny CC license (CC BY-NC-SA 2.0)
25 Janoary, ny onjam-panoherana voalohany nandeha ho ao aminn'y kianja Tahrir. Io no ilay vao mangiran-dratsin'ny revolisiona.
Fizakà-manana Amine Hachimoto. nampiasaina rehefa nahazoana alàlana.
Ilay ankizivavikely miandrandra mijery ity Superman Maraokana miantrana manoloana ny parlemanta ity dia tahaka ny manontany tena raha afaka manidina ilay zalahy io. Mety ho ‘ultra-nationaliste’ miezaka manangona isa ve izy? Na angamba mety ho mpanohana ny vondrona 20 Febroary mpandàla ny fanovàna? Tsy dia olana izany. Satria ao ambadik'io sary mahatsikaiky avy amin'i Amine Hachimoto io no misy ny tena zava-marina iainana ao Maraoka : 2011 no taona nampanjary ho sehatry ny fanehoan-kevitra politika tam-pilaminana ny arabe. Zavatra izay toa mbola hitohy amin'ity taona vao miandoha ity.